Tan Iyo Markii Uu Man United Yimid Waxa Uu Iska Dhigayaa Ciyaartoy Aanu Aahayn- Paul Scholes Oo Burburiyay Romelu Lukaku - Gool24.Net
Tan Iyo Markii Uu Man United Yimid Waxa Uu Iska Dhigayaa Ciyaartoy Aanu Aahayn- Paul Scholes Oo Burburiyay Romelu Lukaku
Khabiirka BT Sports ahna halayygii hore ee Manchester United ee Paul Scholes ayaa si wayn u dhaliilay islamarkaana aan waxba ula hadhin gool dhaliyaha kooxdiisii hore ee Romelu Lukaku kaas oo Old Trafford ku rafaadsan. Lukaku ayaa kaydka la dhigay kulanii Young Boys balse markii uu badalka ku yimid wax saamayn ah oo muhiim ah ciyaarta kumuu samayn.
Paul Scholes ayay layaab ku tahay sababta uu Lukaku ugu soo dego booska caawiyaha weerarka ee No.10 ka wuuxuna ku dooday in tan iyo markii uu Manchester United yimid uu Lukaku iska dhig dhigo in uu yahay ciyaartoy qaadan kara doorka booska No.10 kooxdiisa Man United taas oo uu sheegay in uu ku fashilmay.
Romelu Lukaku ayaa ku jira 14 saacadood oo aanu hal gool soo dhalin laakiin waxaaba xaaladiisa soo koobaysa in Old Trafford aanu hal gool ku dhalin taiyo wixii ka danbeeyay bishii March ee xili ciyaareedkii hore iyada oo xogta noocan ahi ay walwal badan ku tahay ciyaratoy 75 milyan gini ku soo gaadhay Red Devils.
Paul Scholes oo kulankii Man United iyo Young Boys ka falan qaynayay BT Sports ayaa isaga oo ka cadhaysan xaalada Lukaku waxa uu yidhi: “Tan iyo markii uu Man United yimid, waxay u muuqataa in uu ka fikrayo in ay isaga waajib ku tahay in uu ciyaartoy noqdo”.
Laakiin Scholes ayaa la yaaban in Lukaku uu dib ugu soo dego weerarka kooxdiisa Man United isla markaana uu ka ciyaaro booska No.10 ka caawiyaha weerarka wuxuuna yidhi: “Waxa uu yimaadaa doorka No.10 ka kaas oo aanu ka shaqayn, waa waxa ugu danbeeyay ee uu u baahnaa in uu sameeyo”.
Pual Scholes oo kabaha la sii dulmaraya Lukaku ayaa u sheegay in aanu lahayn awoodii uu kaga ciyaari lahaa booska uu dib ugu soo dego ee No.10ka wuuxuna yidhi: “Isagu ma laha awoodii uu taas ku samay lahaa, ha u iman sidii No.10 kama ciyaari kartide”.
Scholes ayaa ka mid ah halyayada hore ee kooxda Man United ee sida wayn u dhaliilsan kooxda uu Mourinho hogaaminayo ee Man United isaga oo si joogto ah u dhaliila wax qabadka Mourinho iyo kooxdiisii hore ee Red Devils.